Toe Tet | TRADITIONAL CZECH CRYSTAL
JITKA SKUHRAVA GLASS
STAINED GLASS ART AND LIGHT PANELS
JAROSLAV SKUHRAVY STAINED GLASS
HAND-MADE GLASS DECORATIONS & TABLEWARE
GLASS TABLEWARE FOR HOUSEHOLDS & HOTELS
PORCELAIN TABLEWARE FOR HOUSEHOLDS & HOTELS
HAND-MADE CRYSTAL JEWELLERY
TRADITIONAL CZECH CRYSTAL
Author Archives: Toe Tet
Presentations at Association of Myanmar Architects (AMA)
Posted on December 26, 2018 by Toe Tet under NEWS AND UPDATES
ချက်နိုင်ငံမှ ရိုးရာမှန်လုပ်ငန်းမှ ဒီဇိုင်းပညာရှင် နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Jitka Kamencova Skuhrava နှင့် Andrea Hyniova တို့မှ မှန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော မီးအလှဆင် နှင့် ပန်းပုဆိုင်ရာ အနုပညာ အကြောင်းနှင့် ချက်နိုင်ငံ၏ မှန်ထည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း သမိုင်းကြောင်းတို့ကို ၂၃၊ ဂျူလိုင်လ၊ ၂၀၁၇ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသွားခဲ့သည်။
Posted on November 24, 2017 by Toe Tet under NEWS AND UPDATES
About Jitka Skuhrava
Posted on August 24, 2017 by Toe Tet under JITKA SKUHRAVA GLASS
Krajina – lesy – tradice – genius loci
Novy Bor region lies at the foot of the Luzicke Mountains. It isaplace where glass has been created for over six hundred years. The glass not only serves its purpose here, but also has the power to inspire, please and amaze. It is the local golden vein, the memory, the beginning and the end. Even the hills in this area seem as made of glass by local craftsmen, and the sun not asastar in the sky, butaglory hole ofafurnace. Glass is the universe, time without passing and space withoutaplace. Therefore it may not beasurprise that this part of land is dedicated to art – art of dreaming, art of creating and art of skills. Continue reading →
Posted on August 17, 2017 by Toe Tet under ART GLASS, Uncategorized
ARTGLASS is one of the leading Czech manufacturers of Bohemian crystal lighting fixtures and Bohemian crystal Chandeliers and bespoke unique lighting fixtures as well. Established in 1993, but built upon centuries old history and tradition of crystal chandeliers manufacturing in northern Bohemia. Supplies to customers all over the world. ARTGLASS is present in the region of South East Asia through its local offices in particular countries and directly in Myanmar is since 2014 when started the cooperation with TRADITIONAL CZECH CRYSTAL and renowned and important architectural Myanmar face, U Thaw and his office ARCHITECT M. THAW & ASSOCIATES. Also, has many other projects for several public (hotels, churches) and privat (residencies, flats) in progress.
ARTGLASS deliver all over the world additionally is capable to assure the installation of the lighting fixtures.
1.Artglass crystal chandeliers can be offered to:
c) property buyers
2.Artglass can design, manufacture, deliver and install tailor-made crystal lightings for:
a) public space of new condominiums
c) public buildings
d) privat residencies
Why to work with Artglass?
1. Traditional Bohemian crystal chandeliers –guarantee of origin and quality
2.Large selection of traditional as well as modern design crystal lighting –each model can be adjusted to meet customer’s special requirements. ‚
3. All products are fully handmade
3.Flexibility to meet any demand from Myanmar clients for individual lighting projects as long as it is technically feasible inashort time isagreat competetive advantage
4. ARTGLASS has its own team of designers and also cooperate with external Czech and foreign designers
5. ARTGLASS has its own team of assemblers who install the chandeliers for the customers all over the world
6. Great advantage in cooperation with local companies who can import the products and deliver them without any problems and, additionally perform the post-installation service for the customers.
Zawgyi: ဥရောပ၊ မွနျမာ လကျရာဒီဇိုငျးမြားနဲ့ Czech Crystal ပစ်စညျးမြား… Unicode:ဥရောပ၊ မြန်မာ လက်ရာဒီဇိုင်းများနဲ့ Czech Crystal ပစ္စည်းများ
Posted on July 28, 2017 by Toe Tet under NEWS AND UPDATES
Zawgyi: ဥရောပအလညျပိုငျးမှာ တညျရှိတဲ့ ခကျြသမ်မတနိုငျငံဟာ ခရဈစတယျနဲ့ ကွှထေညျလုပျငနျးကို နှဈပေါငျးရာခြီ လုပျကိုငျလာခဲ့ပွီး မီးဆိုငျး၊ ခရဈစတယျ၊ ကွှထေညျ အလှဆငျပစ်စညျးမြားနဲ့ လကျဝတျရတနာမြားကို ကမ်ဘာတလှား နိုငျငံမြားစှာ တငျပို့ရောငျးခခြဲ့တာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက ယနထေ့ကျတိုငျပါ။
နာမညျကြျော ဒီဇိုငျနာတှေ ပွုလုပျထားတဲ့ ကွှထေညျပစ်စညျးတှေ၊ ခရဈစတယျ လကျဝတျရတနာ ပစ်စညျးတှကေို ဥရောပ၊ မွနျမာလကျရာ ဒီဇိုငျးကောငျးကောငျးနဲ့ ရှေးခတျေပုံစံ၊ ယနခေ့တျေပုံစံ စသဖွငျ့ “Traditional Czech Crystal Company Limited” မှာ စိတျကွိုကျ အျောဒါမှာယူနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရှေးခတျေ ဒီဇိုငျးမြားနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ခကျြနိုငျငံထုတျ လကျလုပျ ခရဈစတယျ ပစ်စညျးတှေ၊ မွနျမာ့ လကျရာ ဒီဇိုငျးနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အရောငျအသှေးစုံ၊ အနုလကျရာ ဒီဇိုငျးတှနေဲ့ ဝယျယူ ရရှိနိုငျပါတယျ။
Continue reading at ဥရောပ၊ မွနျမာ လကျရာဒီဇိုငျးမြားနဲ့ Czech Crystal ပစ်စညျးမြား
Unicode: ဥရောပအလည်ပိုင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဟာ ခရစ်စတယ်နဲ့ ကြွေထည်လုပ်ငန်းကို နှစ်ပေါင်းရာချီ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး မီးဆိုင်း၊ ခရစ်စတယ်၊ ကြွေထည် အလှဆင်ပစ္စည်းများနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာများကို ကမ္ဘာတလွှား နိုင်ငံများစွာ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ယနေ့ထက်တိုင်ပါ။
နာမည်ကျော် ဒီဇိုင်နာတွေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကြွေထည်ပစ္စည်းတွေ၊ ခရစ်စတယ် လက်ဝတ်ရတနာ ပစ္စည်းတွေကို ဥရောပ၊ မြန်မာလက်ရာ ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ရှေးခေတ်ပုံစံ၊ ယနေ့ခေတ်ပုံစံ စသဖြင့် “Traditional Czech Crystal Company Limited” မှာ စိတ်ကြိုက် အော်ဒါမှာယူနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှေးခေတ် ဒီဇိုင်းများနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချက်နိုင်ငံထုတ် လက်လုပ် ခရစ်စတယ် ပစ္စည်းတွေ၊ မြန်မာ့ လက်ရာ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အရောင်အသွေးစုံ၊ အနုလက်ရာ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Continue reading at ဥရောပ၊ မြန်မာ လက်ရာဒီဇိုင်းများနဲ့ Czech Crystal ပစ္စည်းများ
Posted on July 22, 2017 by Toe Tet under JAROSLAV SKUHRAVY STAINED GLASS
Visit the official website of Jaroslav Skuhravy
Senyr Bijoux Handmade Crystal Jewellery
Posted on July 20, 2017 by Toe Tet under SENYR BIJOUX
Visit the official website of Senyr Bijoux
SENYR BIJOUX-Company Information
Jitka Skuhrava Glass Handmade Crystal
Posted on July 20, 2017 by Toe Tet under JITKA SKUHRAVA GLASS
Visit the official website of Jitka Skuhrava Glass
Halamas handmade Crystal
Posted on July 20, 2017 by Toe Tet under HALAMA GLASS
Visit the official website of Halama
HALAMA GLASS – On All Continents
HALAMA GLASS – colours of glass
HALAMA GLASS – colours of glass II
HALAMA GLASS-HISTORY AND TRADITION
Crystal Glamour hand-made Crystal
Posted on July 20, 2017 by Toe Tet under CRYSTAL GLAMOUR
Visit the official website of Crystal Glamour
CRYSTAL GLAMOUR – Company Information
Crystal Glamour catalogue 2017